TAR ပြုပြင်ရေးကိရိယာ TAR Recovery ကို software ကို။ TAR Fix Tool ကို။
DataNumen TAR Repair အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး TAR ကမ္ဘာပေါ်မှာပြုပြင်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး tool ကို။ ဒါဟာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးပြုပြင်နိုင်ပါတယ် TAR ဖိုင်များကိုအဂတိလိုက်စားမှုလျော့နည်းစေခြင်းဖြင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှသိမ်းဆည်းပါ။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen TAR Repair?
ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့လိုတဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်အကြံပေးပါမယ် Tar ဖိုင်။
MShawn ဖြစ်သူ Scott
ငါ 7GB ကို recover ရန်မနေ့ကသင်၏ software ကိုဝယ်ယူခဲ့သည် tar ကျွန်ုပ်အတွက် "Documents and Settings" လမ်းညွှန်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့ပ်မှသိမ်းယူခဲ့သည်
ငါ 7GB ကို recover ရန်မနေ့ကသင်၏ software ကိုဝယ်ယူခဲ့သည် tar ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်သွားနေသောကျွန်ုပ်၏ laptop မှကျွန်ုပ်၏ "Documents and Settings" လမ်းညွှန်တစ်ခုလုံးပါသောဖိုင်။ အချို့သောစာရွက်စာတမ်းများသည် * ကျွန်ုပ်၏ Quicken ဒေတာ၊ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ကျွန်ုပ်၏စာရင်းကိုင်အတွက်အခွန်ပြင်ဆင်မှုများကဲ့သို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အဆိုပါ freebie ဗားရှင်းကငါ l အရာအားလုံးကိုပြုပြင်နိုင်ပုံပြသသည်ostဒါနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုဝယ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်။ ငါပြေးသောအခါ၎င်းသည် Docs_fixed ကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။tarပြီးတော့ငါပြေးခဲ့တယ်tar xvf * ပေါ်မှာ။ အမှားအယွင်းတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ost မာတိကာ။
သို့သော်ငါ re- သို့ပွေးလေ၏ tar ငါစိတ် ၀ င်စားသောအရာများကိုသာထုတ်ယူရန် filename argument ဖြင့် command
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနာဂတ်၌သင်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သောအရာ (ခရစ်စမတ်တွင်သစ်သီးခြင်းတောင်း၊ သင်၏ကားကိုဆေးကြောပါ၊ အဝတ်လျှော်။ ယူပါ။ ) လိင်မှုကိစ္စအတွက်သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၊ သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲတို့အားပေးဆပ်ရပါမည်။
လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်နာ၊ လယ်သမား၊ လျှပ်စစ်၊ ဂီတပညာရှင်
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen TAR Repair v3.0
စံ Unix ကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု Tar ဖိုင်များကို။
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု Tar floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
အသုတ်တစ်ခုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု Tar ဖိုင်များကို။
ပြင်ဆင်ရန်ပံ့ပိုးမှု Tar 2TB (2048GB) ကဲ့သို့ကြီးမားသောဖိုင်များ။
ရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးရန်ပံ့ပိုးမှု Tar ဖိုင်များကို client ကွန်ပျူတာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည် Tar အလွယ်တကူ Windows Explorer ၏ context menu ကိုအတူဖိုင်။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen TAR Repair ပျက်စီးသွားသော Recover ရန် TAR Archives
ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ TAR မော်ကွန်းတိုက်တွေပျက်စီးသွားတယ် (သို့) ပျက်စီးနေတယ်၊ ​​သင်ပုံမှန်ဖွင့်လို့မရဘူး၊ သင်အသုံးပြုနိုင်တယ် DataNumen TAR Repair စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် TAR ဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှသိမ်းဆည်းပါ။
မှတ်စု: မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမပြုမီ TAR နှင့်အတူမော်ကွန်းတိုက် DataNumen TAR Repairကျေးဇူးပြု၍ အခြားဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကိုပိတ်ပါ TAR မော်ကွန်းတိုက်။
ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားမှုကိုရွေးချယ်ပါ TAR ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်မော်ကွန်းတိုက်:
သင်ထည့်နိုင်သည် TAR Archive name ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
archive ကိုဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ဖို့ခလုတ်ကို။ သင်တို့သည်လည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည်
ရှာရန် button ကို TAR ကွန်ပျူတာထဲမှာပြုပြင်မွမ်းမံမဲ့ archive ဖိုင်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen TAR Repair ပုံသေကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ် TAR xxxx_fixed အဖြစ် archive ကိုဖိုင်။tarxxxx သည်ရင်းမြစ်၏အမည်ဖြစ်သည် TAR မော်ကွန်းတိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရင်းအမြစ်အဘို့ TAR ပျက်စီးသွားသောမှတ်တမ်း။tarပုံသေသတ်မှတ်ထားသော archive သည် Damaged_fixed ဖြစ်သည်။tar။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ထည့်ပါ။
ပုံသေ archive လုပ်ထားသောဖိုင်ကို browse လုပ်ရန်ရွေးပါ။
ခလုတ်နှင့် DataNumen TAR Repair အလိုလိုtart အရင်းအမြစ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း TAR မော်ကွန်းတိုက်။ တိုးတက်မှုဘား
အရင်းအမြစ်လျှင်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် TAR archive ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးပြီဆိုပါကအောက်ပါအတိုင်း message box တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုသင်သည်ပုံသေကိုဖွင့်နိုင်သည် TAR သက်ဆိုင်ရာ applications များနှင့်အတူ archive ကို။
DataNumen TAR Repair ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen TAR Repair ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen TAR Repair ၃.၂ ကိုမတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု tar 7- မှဖန်တီးထားသည့်ဖိုင်များZip.
DataNumen TAR Repair 2.0 ကိုနိုဝင်ဘာလ 16, 2013 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen TAR Repair 1.2 ကိုဇွန်လ 5, 2005 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အဂတိလိုက်စားမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါ CAB မော်ကွန်းတိုက်။